Iqiniso umnqwazo akhethiwe bengayi kuphela efudumele okushisa ezibandayo, kodwa futhi zangisiza ekwenzeni umnikazi walo eziningi ezikhangayo kakhudlwana. Ukugcizelela ngempumelelo umnikazi wemvelo isithunzi futhi bheka kude kwamaphutha kufanele akhethwe kahle isesekeli. Abaningi bakholelwa ukuthi eyolanda ofeleba for round ubuso - a nzima kakhulu, into engenakwenzeka, kodwa akunjalo. Ngokulandelayo, sizochaza ukuthi kungani.
Izici onobuhle ezifana
Umgudu cheekbones futhi kwesilevu smooth and soft, nobude ubuso cishe ilingana nobubanzi - lawa izici zayo esiyindilinga ubuso. Leli fomu ulunika ezinye abasha kanye "onodoli" futhi ubukeka flirty futhi emuhle. Nokho, ngokuqondene kukhethwa headgear, lapha kudingeka uqaphe. Kudingekile ukuba ukhethe imodeli oluyokwenza zibukeke ukudonsa ebusweni, futhi noma kunjalo hhayi ukwenza kube round ngaphezulu ukuma.
Caps models round ubuso, ngeseluleko wochwepheshe, akufanele kube Friend-kufaneleka kakhulu, waba nesifo sokuwa okusezingeni eliphezulu noma ophansi. Lokhu kungaba enkulu ithatha kokuba eside ensimbi alenga bedplate noma nge ezincane usayizi zhokeyka visor. Umthetho oyinhloko ukugqoka lezi zigqoko - ebunzini evulekile. Vula engxenyeni engenhla ubuso nezigqoko phezulu zibukeke wenze ubuso side kakhulu, futhi uyobheka okweqanda. Caps onobuhle azilingani nazo ezinhle kakhulu round ubuso.
Enye ethandwa - ezingconywana zokunemba inkathi izinhlangothi izihlathi. I elilungile kakhulu ngalolu hlobo injongo: cap ne indlebe-enezinto, okuyinto Onezindlebe eside, isigqoko, isikhafu nesigqoko, ngokuthi 'pipe ", okuyinto futhi bathola ukuhlobana ezithile. Imodeli lokuqala njengamanje has a udumo ebanzi kakhulu. Ukukhetha izigqoko wathungela for round ubuso, kungenzeka ukuba ugcine engqondweni. Wabuye kwenzekani kwenziwe obuyimvukumvuku, nge visor, futhi ngaphandle kwakhe, ngezindlebe anobude obungalingani.
Lic noma isikhafu-tube, okuyinto enhle laqina ebusweni nasentanyeni, ukudala isamba esengeziwe ngaphansi kwesilevu, ongaboni yelula ubuso ihlanganisa nezihlathi zakhe ezigcwele. Itshali - inketho kubalandeli of Russian Folk isitayela. Luhle esiyindilinga ubuso, kancane ukufihla ke. Enye nemfashini isitayela ofeleba for round ubuso - cap-hood (ubizwa ngokuthi i-bonnet, kanye hood noma bonnet).
Ungasebenzisa futhi i-cap wathungela enomqhele okusezingeni eliphezulu. Ngokwesibonelo, ngesimo Panama noma izigqoko ngamasimu emincane futhi umqhele ukuphakama isilinganiso. Noma kungenzeka cap-nangesigqoko, okuyinto okufana zempi namaqhawe isiRashiya, okungukuthi omunye wabo, futhi uma kwenzeka iRed Army Budenovka. Lokhu isitayela kanye izindlebe, futhi zingaba ngaphandle kwabo. Uma uthanda imikhiqizo noboya, lesikahle kungaba cap-futhi Kubanka cap-isithungu.
Okufanele ukugweme lapho ukhetha?
izigqoko zabesifazane ukuze round ubuso, isithombe okubona komagazini, njengoba usuvele waqonda, zahlukahlukene kakhulu. ukusikeka okungajwayelekile ngesikhathi esifanayo akufanele kudidaniswe - benza avant-garde isithombe, enezela ngayo okwakhe yayo. Awukwazi ukukhetha isigqoko, njengawo wonke umuntu, ngoba ukuluka zakudala, eduze ekhanda, cha sondelana la mantombazane. A round noboya ivolumu ofeleba kukhona ukuhloba singenakwenzeka round ubuso. Ngakho, lokho ongakhetha ingaphumeleli okwesikhathi round ebusweni shape:
Ofeleba ukumboza ebunzini phansi amashiya, ifomu encane wathungela.
Kuthatha ifomu ejwayelekile.
Shaggy noboya isigqoko yenqwaba.
Ofeleba "ithebhulethi" "ikhekhe" - flat ukuma izigqoko isitayela Retro.
Elinye ithuba izigqoko evamile - noboya-headphone, armbands, ongaboni ukwandisa umuntu.
Ithiphu kulabo abafuna ukhetha umuntu oyisibonelo ukuthi kungahlali
I-caps ngenhla ngoba round ubuso akaphenduli. Uma namanje ngempela ufuna ukugqoka lokhu imodeli isitayela noma izimo yokuthi nje bafake kungenzeka okwamanje, kubalulekile ukukhipha imicu ambalwa izinwele noma esiphongweni ngqo. Lokhu kuzokwenza kancane ukususa umphumela engadingeki "ukuqoqa" ebusweni.
Indlela sihlanganise cap nezinye izinto ezihlobene ikhabethe: amathiphu amantombazane
izigqoko zabesifazane ubuso round ngeke kuhle umphelelisi ikhabethe ne-akhawunti kwesokudla nemingcele eziningana:
umbala izingubo kanye nesitayela.
Uma kuhlangene round ubuso has a ongaphakeme esihlalweni ukuphakama, awudingi ukuba ukhethe yenqwaba nesigqoko. I umqhele futhi kufanele kuhlanganiswe isitayela jikelele kanye outerwear. Nge elingenamikhono esiqinile noma raincoat uzobe kuhlanganiswe cap, a noboya cap elincane, Beret zakudala. Ukuze ibhantshi phansi noma ibhantshi "Alaska" Ukulingana indlebe enezinto, ijazi ngesikhumba semvu - izigqoko ezithakazelisayo noboya noma isikhumba ifaka. izigqoko wathungela for round ubuso, izithombe zazo zingatholakala ku-athikili yethu kukhona ukhetho jikelele, uzodinga ukuba ibe nkulu wathungela noma umhlobiso wokuqala noma isithombe.
Uma thina uthinte on isihloko imibala, i-brunettes kukhona ekahle imibala esibandayo, blue ikakhulukazi nobunamandla onsomi, blonde - imibala iyashintsha iyaphupha ibe, ezifana zamapetshisi, Brown Light - ashy, ukuphaphatheka oluhlaza futhi abomvu - oluhlaza okunsundu elikhanyayo amnyama. onobuhle Kalosha ngokuvamile wonke umuntu.
Izigqoko ingakhetfwa hhayi kuphela esekelwe onjani ofeleba round efanelekayo ubuso. Kudingeka nokuba acabangele izici of esifundeni yokuhlala, izimo lokushisa. Ukushisa ikhanda ziyingozi njengobuthi kuba hypothermia, futhi kungaba ngcono ukuba onobuhle ambalwa izigqoko izimo sezulu ezahlukene.
Ingxenye umzimba nokukhula
Lapho sikhetha ingubo, futhi ungakhohlwa mayelana olinganise umzimba nokukhula.
Ofeleba ubuso round Uma intombazane ulula, noma kunjalo akufanele kube ukuthi besiyoba sikhulu futhi uboya, kubukeka ezihlekisayo. Kanye nowesifazane esikhulu cap kancane wathungela.
Kumele ibe khona kuvumelana izici zobuso lwezikhali ofeleba. Ifomu ecacile Jomethri ye-caps bengakwamukeli izintokazi ngemigqa nenhle kwekhala, amehlo, izindebe. Ezinogqozi avant-garde igqoka ayifanele egqoke amantombazane izici zakudala.
Ofeleba for round ubuso kufanele kukhethwe, ngokugxila futhi kuyanda. izigqoko zelanga eziwumhelane futhi imodeli okusezingeni eliphezulu abakwazi ukugqoka ngiseyintombazanyana, futhi onobuhle amancane miniature - labo eliphezulu lomnotho.
Abesifazane nge round ubuso ukulingana izigqoko CAPS kanye nezigqoko cut weJiyomethri. Nge lapels, ezinkulu viscous - imikhiqizo enjalo kungakusiza wenze kobujamo obusaqanda ngaphezulu, side. onobuhle ezinkulu nge visor, ikakhulukazi leyo zinezinto esikhulu kangcono ngisho quin zokuhlobisa, ziklanyelwe ukwenza umsebenzi ofanayo.
Ngakho-ke, siyaqonda nalokho ofeleba afaneleka round ubuso. Ukuqaphela imithetho elula asesebenzisa izimfihlo lokuzikhethela, ungakwazi sihlawulise ulungise ukuma, okwenza kube emincane kakhulu, futhi ukugcizelela isithunzi engokwemvelo umuntu.
Kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi cap akumelwe kuphela ongaboni wenze ubuso okusaqanda kanye side ngaphezulu, kodwa futhi ngokuvumelana indlela jikelele kuyiwe ingubo engenhla ngesitayela nombala scheme, kanye ukumosha izinwele futhi ungavali ukwakheka akhethwe kahle. Ngakho-ke, liwumthombo ongcono kunayo yonke iseluleko lapho ukhetha models round ubuso namanje kuphela esibukweni umuzwa wakho siqu ngokulinganisela ngesimo ofeleba. Khumbula lokhu, uzama ku isigqoko, khona-ke uyoba ukukhetha ekahle kakhulu nazo zonke izici ngamunye.
Kuyini iqoqo izingubo?
Sofuba Genitourinary: izimpawu, uphethwe, izindlela ukutheleleka
Yini okufakelwa ukubeka kangcono, uma azikho amazinyo?